प्रायः सोधिने प्रश्न-निING्गो मिING्गि मोल्ड विनिर्माण कम्पनी, लि
इंजेक्शन मोल्डको लागि आधारभूत रखरखाव विशिष्टता
ब्याट्री केस मोल्ड
प्याच बोर्ड मोल्ड
इलेक्ट्रिक फ्यान मोल्ड
मिing्गु मोल्ड कुन प्रकारको मोल्डमा विशेषज्ञ छ?
मिing्ग्यु मोल्ड प्लास्टिक ईन्जेक्शन मोल्डमा विशेषज्ञता प्राप्त छ, विशेष गरी अटो पार्ट्स मोल्ड, घर उपकरण मोल्ड, प्याकिंग मोल्ड, इलेक्ट्रोनिक पार्ट मोल्ड र सटीक मोल्डका प्रकारहरूमा।
तपाइँ प्रत्येक वर्ष कति मोल्ड बनाउन सक्नुहुन्छ?
हामी प्रत्येक बर्ष १०० भन्दा बढी सेट इन्जेक्शन मोल्ड बनाउँदछौं, दुबै स्थानीय बजार र विदेशी बजारहरूका लागि।
हामीले धेरै विदेशी देशहरूमा निर्यात गरेका छौं, जस्तै, मेक्सिको, कोलम्बिया, मलेसिया, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, रूस, इजरायल, दुबई, पोल्याण्ड, सर्बिया, दक्षिण अफ्रिका, आदि।
भुक्तानी इटर्म के हो?
/०% अग्रिम भुक्तानी T / T द्वारा, %०% ब्यालेन्स T / T वा L / C द्वारा ढुवानी अघि।
मोल्डको डेलिभरी समय कति हो?
सामान्यतया, पहिलो मोल्ड परीक्षण मिति 1० ~ days० दिन पछि अग्रिम भुक्तानी प्राप्त र रेखाचित्र पुष्टि गरेपछि (बिभिन्न मोल्ड केही फरक हुन सक्छ)। त्यसो भए हामी ग्राहकहरूको जाँच र पुष्टिको लागि परीक्षण नमूनाहरू पठाउनेछौं। यदि सबै ठीकठाक छन् भने, हामी अन्तिम उपचार गर्नेछौं र ढुवानीको लागि तयार पार्नको लागि मोल्डलाई प्याक गर्नेछौं।
मोल्ड इन्क्वायरीका लागि कुन जानकारी चाहिन्छ?
आकार र वजन जानकारीको साथ उत्पादका विस्तृत तस्बिरहरूलाई मोल्ड जाँच गर्न आवश्यक छ। अवश्य पनि, यदि तपाईंसँग उत्पादको थ्रीडी रेखाचित्र छ भने, यो धेरै उत्तम हुनेछ।
मोल्ड साइज के डिजाइन गरिएको छ?
पर्याप्त मोल्ड आधार आकारले आवश्यक शक्ति र इन्जेक्शन मोल्डिंग प्रदर्शनको स्थिरता प्रदान गर्दछ, ईन्जेसन मोल्ड मूल्यलाई अपर्याप्त मोल्ड आकार लोभ्याउने मोल्ड गुणस्तरले तल झार्न प्रयास गर्नुहोस्।
मोल्ड स्टील के प्रयोग गरिन्छ?
त्यहाँ विभिन्न मोल्ड स्टील्स बाहिर छन्, तिनीहरूको प्रदर्शनमा धेरै भिन्नताहरू छन्, भिन्नता पनि एकाई मूल्यमा प्रतिबिम्बित हुन्छ। पी २० प्रि-हार्डन स्टिलको मूल्य २० आरएमबी / किलोग्राम छ, यस बीचमा कडा स्टिल १.२20 सम्म R० आरएमबी / किलोग्राम LKM बाट।
हामी प्रयोग गरिएको स्टीलको ग्राहकको मागलाई सम्मान गर्दछौं, हामी विभिन्न उत्पादका अनुसार सुझाव दिन्छौं।
मोल्डिंग चक्र ग्यारेन्टी कति छ?
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले ईन्जेक्शन मोल्डले तपाईंको उत्पादनको मागहरू भर्न सक्छ कि ग्यारेन्टी गर्न प्रतिबद्धता पाउनुभयो।
सहायक मानक के हो?
डिजाईन गरिएको मोल्ड र एक्सेसरी मानकमा लागू हुनुपर्छ जहाँ मोल्ड चलाउने इञ्जेक्शन मोल्डिंग मोल्ड मर्मतसम्भारलाई सजिलो पार्न। यूरोपका लागि वैकल्पिक मानक HASCO हो, उत्तरी अमेरिका DME हो।
मोल्ड डिजाईन गर्न कति समय लाग्छ?
भाग / मोल्ड संरचनाको जटिलतामा निर्भर गर्दछ, यसले सामान्य रूपमा २D लेआउटको लागि २- days दिन लाग्छ, 2D- detailed दिन विस्तृत डिजाइनको लागि days- days दिन।
के मोल्ड डिजाइन लागत प्रस्तावमा समावेश छ?
डिजाइन डाटा खरीददार द्वारा प्रदान र आधिकारिक मानिन्छ, डिजाइन वा डिजाइन संशोधनको लागि कुनै अतिरिक्त शुल्क छैन।
मोल्ड बनाउने प्रबन्ध कसरी गर्ने?
चिनियाँ मोल्ड कारखाना पत्ता लगाउने ठाउँ क्रेता भन्दा टाढा छ, एक कडा र राम्रो योजना बनाई अनुसूची पेश गरिनु पर्छ र साप्ताहिक ट्र्याकिंग रिपोर्ट ग्राफिक रूपमा इंजेक्शन मोल्ड निर्माता द्वारा प्रदान गरीन्छ।
स्टिल NAK80 र S136 बीच के फरक छ
NAK80 एक पूर्व कठोर मिरर पालिश गरिएको प्लास्टिक मोल्ड स्टील हो। S136 एक हवा प्रकारको स्टेनलेस स्टील हो बिना कठोरता, जुन ऐना एन्टी-जंग र एन्टी-रस्ट फंक्शनको साथ दर्पण पॉलिश गरिएको प्लास्टिक मोल्ड स्टील हो।
NAK80 एक पूर्व कठोर इस्पात EX कारखाना कठोरता HRC38-41 को साथ छ। S136 को दोहन गर्मी उपचार पछि HRC48-52 हुन सक्छ।
NAK80 मिरर पॉलिशिंग 10000-12000 जालमा पुग्न सक्छ। उच्च गुणवत्ता S136 गर्मी उपचार पछि 12000-18000 जाल पुग्न सक्छ।
अवसरहरू: NAK80 मुख्यतया ऐना-पालिश देखा पर्ने भागहरूको साथ प्लास्टिकका सामानहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ, र एन्टी-रस्टको आवश्यक पर्दैन। S136 उच्च दर्पण पॉलिश प्लास्टिक उत्पादनहरु को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ, जस्तै: ऑप्टिकल मिरर प्लास्टिक उत्पादनहरु, र प्लास्टिक ढाँचा विरोधी जंग र एन्टी-रस्ट फंक्शन आवश्यक छ।
प्रयोग गरिएको वास्तविक इस्पात कसरी सुनिश्चित गर्ने?
साधारणतया,चिनियाँ मोल्ड आपूर्तिकर्ताहरूले प्रयोग गर्ने इस्पात सामान्यतया एलकेएमबाट किन्छन्, एलकेएम एशियामा सब भन्दा ठूलो मोल्ड बेस / मोल्ड स्टिल आपूर्तिकर्ता हो, इस्पात र तातो उपचार प्रमाणपत्रहरू उपलब्ध छन्।
मोल्ड टेक्स्ट प्लास्टिक रालका लागि को जिम्मेवार छ?
स्थानीयमा सजिलैसँग भेट्न सकिने सामग्रीहरू इन्जेक्शन मोल्ड आपूर्तिकर्ताले तयार गर्नुपर्दछ, चीनमा किन्न नसकिने विशेष रालका केही खरीददारहरूले उपलब्ध गराउनुपर्दछ।
नमूनाहरू सहित के प्रदान गरिनेछ?
मोल्ड शर्तमा राम्रो पूर्वानुमानका लागि, नमूनाहरूको साथसाथै गेट / रनर, इन्जेक्शन मोल्डिंग प्यारामिटर रिपोर्ट, मोल्ड भाग पार्ट आयाम रिपोर्ट प्रदान गरिनु पर्दछ।
नमूना वितरण लागत को लागी को जिम्मेवार छ?
नमूना वितरण सामान्यतया इन्जेक्शन मोल्ड निर्माता द्वारा जिम्मेवार हुन्छ; यस लागतले प्लास्टिकको मोल्ड निर्मातालाई चलाउन सक्दछ इंजेक्शन मोल्ड प्रोजेक्टलाई सकेसम्म चाँडो सफल बनाउनको लागि।